TrueMoney နဲ့​ငွေလွှဲပြီး Bonus Points ၅၀၀ ရယူလိုက်ပါ - True Money Myanmar
TrueMoney နဲ့​ငွေလွှဲပြီး Bonus Points ၅၀၀ ရယူလိုက်ပါ
TrueMoney နဲ့ ပြည်တွင်း​ငွေလွှဲခြင်းနှင့် ပြည်ပ​​​ငွေထုတ်ခြင်းတို့အတွက် Bonus Points ၅၀၀ ကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လစဥ် ပြည်တွင်း​ငွေလွှဲနဲ့ ပြည်ပ​ငွေထုတ်ခြင်း ၂ ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် ​ငွေပမာဏ ၁၀၀၀၀ ကျပ်အထက်ရှိပါက Bonus Points ၅၀၀ ကိုလစဥ်ရရှိမှာပါ။
Bonus Points များကို ဝန်​ဆောင်မှုအသုံးပြုသည့်လကုန်ပါက ဖြည့်တင်း​ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Q1- Bonus Points များအားမည်သည့်အခြေအနေတွင် လက်ခံရရှိမလဲ?
A1- Rewards App အသုံးပြုသည့် Customers များသည် တစ်လလျှင် ပြည်တွင်းငွေလွှဲ/ပြည်ပငွေထုတ် (၂) ကြောင်းနှင့်အထက် ငွေလွှဲ (၁) ကြောင်းလျှင် ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ အထက် ရှိပါက Bonus Points – ၅၀၀ အား ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Q2- Bonus Points များအား မည်သည့်အချိန်တွင် ထည့်သွင်းပေးမည်နည်း?
A2- အဆိုပါ Bonus Points များအား ဝန်ဆောင်မှုရယူသည့် လကုန်ပြီး ၃ ရက်အတွင်း Customer ၏ Rewards App အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Q3- Bonus Points Campaign ၏အချိန်ကာလ
A3- Bonus Points Campaign သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၁ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အထိ TrueMoney Rewards App အသုံးပြုသည့် မည်သူမဆို ပါဝင်ခွင့် ရှိပါသည်။
Q4 – Rewards App အား စတင်အသုံးပြုသူများသည် Welcome Points အား လက်ခံရရှိပါမည်လား?
A4- Rewards App အား စတင်အသုံးပြုမည့်သူများသည် Welcome Points အား လက်ခံရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ (အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့သည် Welcome Points နောက်ဆုံးပေးသည့်ရက်ဖြစ်သည်)။
Q5- Rewards App အသုံးပြူသူများသည် ပုံမှန်ပေးနေကျ Rewards Points များအား TrueMoney ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြူခြင်းအတွက် ရရှိပါမည်လား?
A5- Rewards App အသုံးပြူသူများသည် ပုံမှန်ပေးနေကျ Rewards Points များအား TrueMoney ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြူခြင်းအတွက် ရရှိပါမည်။ (ပြည်တွင်းငွေလွှဲနှင့် ပြည်ပငွေထုတ်များအတွက် Rewards Points များအား နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ တိုးမြှင့်ပေးထားပါသည်။)
ငွေကြေးအကုန်အကျသက်သာစေပြီး ‘အသုံးလည်းတည့်တဲ့’ TrueMoney Rewards App ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူရန်…
Change in Domestic Remittance Service Fees
Cash-In and Cash-Out services are now available at TrueMoney head offices
International Money Transfers are now available for Bank Withdrawals
2022 © TrueMoney Myanmar Co., Ltd.